नेपाल आज | सिंगापुर कसरी ३० वर्षमै विकसित देश बन्यो ? (भिडियोसहित)
सिंगापुर कसरी ३० वर्षमै विकसित देश बन्यो ? (भिडियोसहित)
शुक्रबार, १९ माघ २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज (NP)
काठमाडौं । स्थानीय तह, संघीय तथा प्रदेश सभाकाे चुनाव भइसकेको छ । यसपटकको चुनावमा सबैजसो राजनीतिक जारी गरेको घोषणापत्रमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने र लगानी बढाउने वाचा गरेका छन् ।
तर लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्यसँग जोडिएको विद्यालय शिक्षाको समस्या त्यसको सुधारको बारेमा खासै काम गरेको देखिदैन । देशका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरुमा न त पूर्वाधार राम्रो छ, न पठनपाठन ।
सामुदाय विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गइरहेको छ भने बीचैमा पढाइ छाड्ने विद्याथीहरुको संख्या पनि बढी रहेको छ । अहिले शिक्षकले स्रोतव्यक्तिलाई स्रोतव्यक्तिले जिल्ला शिक्षा कार्यलाई, जिल्ला शिक्षा कार्यलयले क्षेत्रलाई र क्षेत्रले प्रदेशलाई ठग्ने परिपाटी बनिरहेको छ ।
हुनेखानेले मात्रै होइन दिनभरी मजदुरी गर्ने ब्यक्तिले पनि निजी विद्यालयमा आफ्ना छोरा–छोरीलाई भर्ना गर्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शाख कसरी जोगाउन सक्ला ?
अवको मजबुद सरकार भनेको स्थानीय तह भएकाले शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तरिय शिक्षाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुे र तुलनात्मक रुपमा दाँजेर योग्य जनशक्तिको तयार गर्न सक्यो भने मात्रै देशको विकास हुन सक्ने विगत ८ वर्षदेखि प्रदेश नम्बरकाे सातकाे विकट जिल्ला डेडलधुराका शिक्षासेवी धनबहादुर साउदले बताए ।
सरकार र अभिभावककाे सयुक्त लगानी रहेको सामुदायक विद्यालयका शिक्षक, स्थानीय नेता, व्यापारीलगायतले निजी विद्यालयमा पढाउने परिपाटी बन्द गर्नु पर्ने उनकाे जिकिर । शिक्षाको स्तरीयतालई वृद्ध गरे विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गरी नेपलालाई शैक्षिक हव र शैक्षिक पर्यटनको विकास गर्नु सकिने उनकाे तर्क छ ।
निजी विद्यालयमा चर्को शूल्क लिएर आकर्षण मात्रै देखिएको जिकिर गर्दै उनले विद्यार्थीको गुणस्तर सामुदायक विद्यालयमा पढेकाको राम्रो रहको उनले दाबी गरे । अहिलेसम्म लोकसेवा आयोगले लिएका परीक्षामा सामुदायक विद्यालयमा पढेका धेरै विद्यार्थीहरु उत्र्तीण गरेको उदाहरण दिँदै उनले निजी विद्यालयमा जान नपर्ने बताए ।
निजी विद्यालयले शहर र गाउँ, धनी र गरिब भनेर वर्गीय विभाजन सृजना गरेको उनको भनाइ छ । अहिले सामुदायीक विद्यालयले पनि अंग्रजी माध्यमलाई प्राथमिकता दिएकाले शिक्षामा धेरै सुधार भएको उनको तर्क थियो ।
त्यस्तै, विदेशी प्रतिभा स्थानीय ठाउँमा ल्याउन सक्ने क्षमताको विकास गर्नु पर्ने उनको जिकिर छ । सिंगापुरले विदेशबाट प्रतिभा ल्याएर विकासलाई तिब्रता दिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले पनि विदेशी प्रतिभालाई नेपालमा ल्याउन सक्ने पूर्वधारको विकास गर्नु पर्ने बताए ।
कम्युनिष्टहरू राजशाही पथमा, ओलीमा राजा बन्ने लालशा